वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ ? ठगीबाट बच्ने सजिलो उपाय | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ ? ठगीबाट बच्ने सजिलो उपाय
साउन २१, २०७६ मंगलबार १५:७:२१ | सन्जिता देवकोटा
काठमाण्डौ – नवलपरासीका ईश्वरी पौडेल साउन १० गते यूएई उड्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । घरबाट ८ गते बिदा भएर निस्कने तयारीमा रहेका ईश्वरीलाई ५ गते नै काठमाण्डौबाट एक जना साथीले फोनमा भने, विदेश उडाउने एजेण्ट त भाग्यो ।
त्यस्तै सार्वजनिक सूचना, विभिन्न नीति नियम, प्रतिवेदनसमेत मोबाइलबाटै अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
विदेशमा पाइने कामको घरमै बसेर हेर्न सकिन्छ
विदेशमा पाइने काम र सेवा सुविधाको बारेमा बुझ्न म्यानपावर वा एजेण्टको भर पर्नै पर्दैन ।
आफूले गर्न चाहेका काम कुन देशमा गर्न पाइन्छ र के के सेवा सुविधा पाइन्छ, त्यो काममा कुन म्यानपावरले पठाउँछ भन्ने कुरा अब वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटबाटै जानकारी लिन सकिन्छ ।
हिजोआज डिमाण्डमा उल्लेख भएको भन्दा पनि धेरै सेवा, सुविधा पाइने भन्दै एजेण्ट र म्यानपावरले ठग्ने क्रम बढिरहेको छ । तर अब वेबसाइटबाटै यो जानकारी लिन सकिने हुँदा एजेण्ट र म्यानपावरले भनेको कुरालाई विभागको वेबसाइटमार्फत पनि जाँच्न सकिन्छ ।
स्वदेश तथा विदेशमा रहेकाले फोन, इमेल, इमो भाइवर लगायतबाट आफ्ना सुझाव, गुनासो वा जानकारी लिन सकिन्छ । देशभित्र भएकाहरुले ११४१ र १६६००१५०००५ नम्बरमा फोन गरेर गुनासो राख्न र जानकारी लिन सकिन्छ । विदेशमा हुनेहरुले भनेर ९७७ – १–५९७०००८ मार्फत फोन गरेर गुनासो वा जानकारी लिन सक्नेछन् ।
९७७ – १–५९७०००८ नम्बरमार्फत भाइवर, इमो म्यासेन्जरमार्फत आफ्नो गुनासो सुझाव र जानकारी लिन सकिने छ । साथै वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेको टोल फ्रिमा फोन गरेर पनि आफ्नो गुनासो राख्न सकिन्छ ।
पालिकाहरुमा रोजगार सेवा केन्द्र
अहिले ७५३ वटै पालिकाहरुमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना भएको छ । यो सेवा केन्द्रबाट पनि सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ ।
सेवा केन्द्रबाट बेरोजगारको विवरण संकलन गर्ने, अभिमुखीकरण लगायतका तालिम सञ्चालन गर्ने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई आवश्यक जनशक्ति केन्द्रबाट उपलव्ध गराउने योजना बनाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था पासपोर्ट बनाउन जाने सबैलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
प्रशासन कार्यालयमा रहेको सूचना केन्द्र वा हेल्प डेक्सबाट पनि वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी जानकारी लिन सकिनेछ । त्यस्तै अबदेखि पासपोर्ट बनाउन जाने सबैलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका बारेमा जानकारी दिनेगरी काम अघि बढाउने विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईँले बताउनुभयो ।
‘वैदेशिक रोजगारीको सुरुवात पासपोर्ट बनाउने प्रक्रियाबाटै सुरु हुने भएकाले हामीले पासपोर्ट बनाउन जाने प्रत्येक नागरिकलाई सूचना दिने गरी अब काम अघि बढाउँछौं,’ सूचना अधिकारी गुरागाईँ भन्नुहुन्छ, ‘सबैभन्दा पहिला त व्यक्ति स्वयंलाई सुसूचित गराउन आवश्यक छ ।’
गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै यसरी ठगीमा परेका २०३९ उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगीबाट बच्न आफैं सचेत हुनु र पहिले विदेश गएर फर्किएका आफन्तसँग जानकारी लिन पनि सूचना अधिकारी गुरागाईँ सबैलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ ।